Ciidamada Itoobiya oo duqeyn culus ku qaaday caasimadda Tigray iyo TPLF oo ka hadashay... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ciidamada Itoobiya oo duqeyn culus ku qaaday caasimadda Tigray iyo TPLF oo ka hadashay... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ciidamada Itoobiya oo duqeyn culus ku qaaday caasimadda Tigray iyo TPLF oo ka hadashay…
Ciidmada Itoobiya ayaa duqeyntii labaad oo dhinac acirka ah ku qaaday caasimada Gobolkla Tigray ee Makelle, iyadoo qasaare weyn laga soo weriyey inay geysatay duqeynta.
Afhayeenka Jabhadda Tigray ayaa sheegay in duqeynta ka dhacday magaalada Makelle uu Abiy Ahmed la beegsaday degaanada rayidka, ayna nasiib darro tahay inuu weerarro magaalo boqolaal KM ka fog, goobah dagaalka, tasoo muujineysa inuu ku jabay dagaalka socda.
Telefishinka Tigray oo ay maamusho Jabhadda Xoreynta Dadka Tigrayga ee TPLF, ayaa sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsaday bartamaha magaalada Mekelle laakiin ma faahfahain Qasaaraha iyo waxyeelada ka dhalatay.
Waxay la shaaciyey sawirro u muuqday qiiq cirka isku shareeray oo duqeyntu dhalisay. Dowladda Itoobiya ayaa markii dambe sheegtay in duqeynta cirka lala beegsaday dhismayaal ay ciidamada Tigreegu ku dayactirayeen hubka.
“Waxay quus ka taagan yihiin aagagga dagaalka.. waxaan oran karaa waa inay na duqeeyaan maxaa yeelay dagaalkii dhulka ayay ku fashilmeen, waana aargoosigooda. Duqeynta rayidka Tigray waxay muujineysaa inaysan dan ka lahayn Dadka” ayuu yiri hoggaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael.
Dad goobjoojayaal ah ayuaa sheegay in duqeynta lala beegsaday xarunta shirkad lagu magacaabo Mesfin Industrial Engineering PLC. Waxaana dab xoog leh uu qabsaday xaruntaasi.
Duqeyntan ayaa daba socota dagaalo sii xoogaystay oo ka dhacay laba gobol ee Amhara iyo Cafarta, halkaas oo milatariga dawladda Itoobiya ay isku dayayaan inay soo ceshadaan dhulkii ay qabsadeen kooxda TPLF.
Labada dhinac ayaa ku dhawaad ​​hal sano ku jiray dagaal ay ku dhinteen kumanaan qof halka ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof.
Previous articleAlshabaab oo Dab qabadsiisay Gaari Dameero raashin u waday Degmo ay go’doomiyeen
Next articleRW Rooble oo ku dhawaaqay Gurmad xukuumadda u direyso Jubbaland, Warna kasoo saaray…